मरिसससँग नेपालको श्रम समझदारी : नेपाली कामदारले कसरी र केके पाउँछन् सुविधा? :: PahiloPost
मरिसससँग नेपालको श्रम समझदारी : नेपाली कामदारले कसरी र केके पाउँछन् सुविधा?
11th June 2019, 10:54 pm | २८ जेठ २०७६
काठमाडौं : नेपाल र मरिसस सरकारबीच श्रमिक आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आज दुई मुलुकका अधिकारीबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
मरिसससँग नेपालको श्रम समझदारी : नेपाली कामदारले कसरी र केके पाउँछन् सुविधा? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।